လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူမဟုတ်ပါ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်သင်လိုချင်သောအရာအားလုံးကိုမရနိုင်ပါ။ သို့သော်လူအများတို့သည်အိမ်ထောင်ကိုဘဝ၏မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ သို့သော်အချိန်မတန်မီတစ်သက်လုံးနောင်တရစေနိုင်သည်။ လက်ထပ်ပြီးနောက်သင်ရင်ဆိုင်ရမည့်အရာသည်တစ်သက်တာဖြစ်သည်။ ခရီးစဉ်အတွင်းသင့်ရည်မှန်းချက်ကိုဂရုတစိုက်မရွေးချယ်ပါကနောက်တဖန်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်ထောင်တစ်ခုကိုပြန်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်လက်ထပ်ရန်သင့်လျော်သောအိမ်ထောင်ဖက်ကိုရွေးချယ်ပါကတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကြိုက်များ၊ မိသားစုသဘောတရားများ၊ မိသားစု၏အမှန်တကယ်အခြေအနေကိုပိုမိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဥပဒေများ၊ ခံစားချက်များနှင့်ကြွေးမြီများနှင့်ပတ်သက်သည့်အငြင်းပွားမှု၏ထက်ဝက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိ၊ သို့သော်ထိုအခြေအနေများကိုအသွင်အပြင်နှင့်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေ့လာရန်မလုံလောက်ပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုဂ္ဂလိကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများမှတစ်ဆင့်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်အားကျွမ်းကျင်သောခရက်ဒစ်ဗျူရိုအကူအညီတောင်းသင့်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရသောကိစ္စရပ်များစွာတွင် client သည်ဖောက်သည်သည်ထိုခြေလှမ်းကိုလှမ်းရန်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရပြီး၊ အခြားတစ်ဝက်သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြိုအကြွေးပြုနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အခြားပါတီအားယုံကြည်မှုမရှိဟုခံစားရသည်။ သင်မည်မျှလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်စီစဉ်ထား? လက်မထပ်မီအကြွေးသည်ခေတ္တယာယီသာဖြစ်သော်လည်းလက်ထပ်ခြင်းသည်တစ်သက်တာဖြစ်သည်။ သင်နောင်တရသည့်အရာအားမပြုလုပ်ပါနှင့်အခြားတစ်ပါတီအားနောက်ဆုံးစာမေးပွဲမဖြေပါနှင့်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရန်နှင့်အခြားပါတီသည်သင်၏ဘဝတွင်အရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ထူထောင်လိမ့်မည်
လက်မထပ်မီအကြွေးကတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မယုံဘူးလား။
တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားမိသားစု၏ဖန်စီ! လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုမပြုမီခရက်ဒစ်စစ်ဆေးခြင်းသည်သင့်အားလိမ်လည်မှုမှဝေးကွာစေသည်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာငါ့မျက်စိမျက်စိကွယ်, ငါတခြားသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်ကိုနားမထောင်လည်း ca
မှားယွင်းသောသူနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားနေသည့်သူ၏သမီးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်၊ လက်မထပ်မီသူ၏ယောက္ခမအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခရက်ဒစ်ဗျူရိုအားမေးမြန်းခဲ့သည်၊ သို့သော်သူသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့သလား။